भेन्टिलेटरको माग ह्वात्तै बढ्यो, कहाँ कति ? – Maitri News
भेन्टिलेटरको माग ह्वात्तै बढ्यो, कहाँ कति ?
काठमाडौँ। विश्वमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै त्यसको उपचारमा महत्वपूर्ण मानिएको भेन्टिलेटरबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ । अहिले विश्वमा भेन्टिलेटको माग ह्वातै बढेको छ । चीनबाट सुरु भएको कोरोना युरोप, अमेरिका, एशिया हुँदै अफ्रिका तर्फ फन्को मार्दै छ । कोरोनाको उपचारमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको भेन्टिलेटर के हो र विश्वमा कहाँ कति छन् यसबारे धेरैलाई चासो हुन सक्छ ।
भेन्टिलेटरबारे सुन्दै अचम्म लाग्ने केही तथ्य बाहिर आएका छन् । एक करोड बीस लाख जनसंख्या भएको अफ्रिकाको दक्षिणी सुडानमा पाँच जना उपराष्ट्रपति छन् तर त्यहाँ भेन्टिलेटर जम्मा चारवटा मात्र हेका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी भेन्टिलेटर भएको मुलुक अमेरिका हो जहाँ एक लाख ७७ हजार भेन्टिलेटर उपलब्ध छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस ९कोभिड–१९० को संक्रमण भएमा सघन उपचारका लागि विरामीलाई भेन्टिलेटर अति आवश्यक हुन्छ । सघन कक्ष र भेन्टिलेटर विरामीको लागि जीवनबुटी नै मानिन्छ । तर विश्वका केही देशहरुमा भेन्टिलेटर आवश्यकभन्दा पनि निकै कम रहेको पाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा भेन्टिलेटरको आवश्यकता नेपालमा पनि रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवत्ता डा। विकास देवकाटाले नेपालमा ५५० वटा भन्दा बढी भेन्टिलेटर रहेको गोरखापत्रलाई बताउनुभयो । राजधानीबाहिर करिब २७० को हाराहारीमा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि भेन्टिलेटर अपुग हुने भएकाले २३५ वटा थप गर्नको लागि सरकारी निर्णय सहित खरिद प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ती भेन्टिलेटर सरकारी तथा निजी अस्पताललाई उपलब्ध गराइने छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएपछि ‘हेल्थ एट होम’नामक एक गैरसरकारी संस्थाले ‘एकसय दिनमा एकहजार भेन्टिलेटर’ पु¥याउने अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ ।
सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी भारतमा ४० हजार भेन्टिलेटर छ जहाँ एक अरब ३५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । २१ करोड २२ लाख जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा ३८ सय ४४ वटा भेन्टिलेटर छन् । सेभ दि चिल्ड्रेनका अनुसार बंगलादेशमा करिब १७ सय ६९वटा भेन्टिलेटर रहेका छन् । त्यहाँ १६ करोड १४ लाख जनसंख्या रहेको छ ।
के हो भेन्टिलेटर
भेन्टिलेटर एक प्रकारको इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण हो जस्को कारणले विरामीको ज्यान जोगिन सक्छ । यसलाई जीवन उपयोगी मेसिन वाजीवन जोगाउने मेसिनको रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । यो उपकरण विना कतिपय विरामीलाई बाचाउन मुश्किल पर्छ । विरामी अचेत रहेको अवस्थामा सास फेर्न नसक्दासघन उपचार कक्षमा यस उपकरणबाट सास फेर्न लगाइन्छ । त्यस्तै, विरामीको शल्यक्रिया गरेको बेलामा पनि भेन्टिलेटरको मद्दतले सास फेर्न लागाइन्छ । कोभिड–१९ संक्रमण भएका व्यक्तिलाई निमोनिया भएर सासप्रश्वास फेर्न गा¥हो भए यो उपकरण अतिआवश्यक हुन्छ । ती व्यक्तिलाई बचाउन यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ ।
वीर अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार भेन्टिलेटर कुनै पनि विरामीको लागि थप प्राण दिने उपकरण हो । कतिपय अबस्थामा भेन्टिलेटर भयो भने विरामी बाच्नपाउने अवसर जुर्छ, छैन भने भन्न सकिन्न । उहाँका अनुसार भेन्टिलेटरमा विरामीलाई राखे पछि श्वासप्रश्वास फेर्न सजिलो हुन्छ नै यो उपकरणसँगै थप अरू डिजिटलाइज्ड मेसिन हुन भएकाले अहिले मुटुको चाल, ब्लड प्रेसर लगायत सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हुने भएकाले विरामीको हेरचाहमा सहयोग पुगेको छ ।
अफ्रिकामा सबैभन्दा कम, नाम मात्रको भेन्टिलेटर
एक करोड बीस लाख जनसंख्या भएको अफ्रिकाको दक्षिणी सुडानमा पाँच जना उपराष्ट्रपति छन तर त्यहाँ भेन्टिलेटर जम्मा चार रहेको छ । त्यहाँ २८ वटा आइसीयू शैया रहेका छन् ।
५० लाख जनसंख्या रहेको सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मात्र तीन वटा भेन्टिलेटर रहेको छ । त्यसैगरी, अफ्रिकी देशहरु माली पनि ३, कंगोमा ५, मडागास्कारमा ६, लाइबेरियामा ६, नामिबियामा १०, बुर्किना फासोमा ११, सेरा लियोनमा १३ वटा भेन्टिलेटर छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ४१ वटा अफ्रिकी देशहरुमा दुई हजार भन्दा कम भेन्टिलेटर र ४३ वटा देशहरुमा सघन उपचार कक्षमा पाँचहजार भन्दा कम बेडहरु रहेका छन् ।
अमेरिकामा धेरै भेन्टिलेटर
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण भएसँगै भेन्टिलेटरको माग उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चीनमा भेन्टिलेटर अत्याधिक मात्रामा निर्माण हुने भएकाले विश्वको आँखा चीनतिर फर्केको छ । भाइरससँग लड्नको लागि अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरुले चीनबाट भेन्टिलेटर खरिद गरिरहेकाछन् । यद्यपि चीनमा विरामीको लागिकति भेन्टिलेटरहरु उपलब्ध रहेको छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन ।
भेन्टिलेटरको विश्वमामा सबैभन्दाबढी प्रयोग गर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । त्यहाँ एक लाख ७७ हजार भेन्टिलेटर रहेका छन् । भाइरससँग लड्नको लागि त्यो अपुगे बताउँदै चीनसँग हजारौं भेन्टिलेटर खरिद गरेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरुमा कति
रुसमा चालू अवस्थामा ४० हजार भेन्टिलेटर रहेका छन् । जर्मनीमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन अगावै २५ हजार भेन्टिलेटर रहेकोमा सन् २०२० को जनवरीमा २८ हजार पु¥याँदै चालू अप्रिलसम्म ४० हजार पु¥याइएको छ । जापानमा सन् २००९ मा ३२हजारभन्दा बढी रहेको थियो भने अहिले सो संख्या बढेको छ ।
युरोप र एसिया
त्यसैगरी, फ्रान्समा एक दशक अघि करीब दशहजार भेन्टिलेटर रहेकोमा अहिले ३० हजार पु¥याएको छ । कोरोना भाइरसले युरोपमा सबैभन्दा आमविनाश गरेको इटालीमा करिब पाँचहजार मात्र भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको छ । बेलायतमा करिब पाँच हजारदेखि आठहजारजति भेन्टिलेटर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
टर्कीको १७ हजार, पोल्याण्डको १० हजार भन्दाबढी र दक्षिण कोरियामा करिब १० हजार भेन्टिलेटर विरामीको उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ ।
धनी मानिएका देशहरुमा पनि भेन्टिलेटर कम मात्रामा पाइएको छ । पोर्चुगलमा १४ सय र अष्ट्रेलियमा करिब १४ सय, नर्वे आठसय, स्वीडेन करिब छ सय, न्यूजिल्याण्डमाकरिब पाँचसयमात्र भेन्टिलेटर रहेका छन् ।
इटालीबाट पाठ सिकौं
भेन्टिलेटर अपुग भएकै कारणले संक्रमित ज्येष्ठ नागरिकलाई ध्यान नदिएर युवावर्गलाई लक्षित गरेकाले इटालीमा भयावह स्थिति उत्पन्नभएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक तथा समाजशास्त्री मधुसुदन सुवेदीले प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँकाअनुसार विकसित देश इटालीमा मृत्यु संख्या त्यसरी बढ्नुमा भेन्टिलेटरको प्रमुख भूमिका रहेकाले गरीब देश नेपालमा महामारी फैलिएमा नेपालले थेग्न सकिंदैन ।
‘नेपाली समाजको रक्षाकवच भनेकै अहिलेको लागि भौतिक ९सामाजिक० दुरी कायम गरेर दैनिक काम गर्ने र लक डाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न सकेमा नेपाली जनताको ज्यान सुरक्षित छ,’ समाजशास्त्री सुवेदी भन्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: छ सय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन
Next Next post: आप्रवासी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको घोषणा